The A na Z Nduzi maka Mgbakwunye Onwe Onye | Martech Zone
Ka m na-etolite, amalitere m ịchọpụta na isi ihe na-egosi ọganiihu azụmaahịa m bụ uru nke netwọkụ m debere ma debe. Ọ bụ ya mere m ji etinye oge nke oge kwa afọ ịkparịta ụka, na-ekwu okwu ma na-aga nzukọ. Uru nke netwọkụ m na - eweta, na netwọkụ m na - enweta 95% nke ego na ihe ịga nke ọma nke azụmaahịa m na - achọpụta. Nke ahụ bụ nsonaazụ nke ihe karịrị afọ iri nke mbọ m mere iji nyere ndị na-elekọta gị aka ka ị chọta ma jiri teknụzụ nyere aka maka mkpa ahịa gị. Teknụzụ ahịa abụghị naanị blog m, ọ bụ nke m njirimara onwe.
Na-amasị m na-eche nke onwe mbọn dị ka a ụzọ na-amalite na-ekwurịta okwu na ndị mmadụ ogologo oge tupu m izute ha. Mgbe imesiri ya, o di ka inwe enyi gi meghe ya. Don't hụghị ya n’anya mgbe nke ahụ mere? Ime ihe iji meziwanye ụdị onwe gị bụ ihe gbasara onye ị bụ na ihe ị chọrọ ka amara gị. Ma ị bụ onye na-achọ ọrụ, onye na-ere ahịa, ma ọ bụ onye njikwa na-achọ ịbanye, enwere ọtụtụ ihe ị ga-enweta site na ịkọ akụkọ ahụ site na echiche mmadụ, dịka ịchọrọ ka a gwa ya. Seth Ahịa, Placester.
Ihe omuma ihe omuma a bu ntuziaka di egwu site na Barry Feldman (Guru: Chọọ Onwe Gị: A Branding Brand Ga). Etinye ego gị ika - na ụlọ ọrụ ga-etinye gị ego! Chọrọ ịgụ miri emi? Aga m akwado Mbọnyere Onwe Gị: Etu esi eji Social Media echepụta ma ọ bụ chegharịa onwe gị site n'aka ndị enyi Erik Deckers na Kyle Lacy.
Tags: Erik DeckersNwachukwunjirimara onwenjirimara nke onwetinyeọnụahịa seth
Daalụ maka ịkpọtụrụ, post, njikọ nke ọkwa ọhụrụ m, yana maka ịbụ onye mara mma Douglas. Ọ dị mma izute gị site n'ọdụ ụgbọ mmiri izu ole na ole gara aga.